ချွေးထုတ်ခန်းရောက်တဲ့နေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ချွေးထုတ်ခန်းရောက်တဲ့နေ့
Posted by etone on Aug 3, 2011 in My Dear Diary | 15 comments
MRTV4 ရဲ့ ၇ကြိမ်မြော်က နှစ်ပတ်လည်
ရုံးပိတ်ရက်လည်းဖြစ် ၊ သွားစရာ အထွေထူးမရှိတဲ့နေ့လည်းဖြစ်တာမို့ … MRTV4ရဲ့ … 7နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းနားကို သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ် … ။ တပ်မတော်ခန်းမမှာ ဇူလိုင် ၂၉ရက်ကနေ သြဂုတ် ၁ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေငြာထားသော်လည်း … တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်မို့ …. တခြား နေ့တွေထက် လူပိုစည်တာ တွေ့ရပါတယ် … ။ ၀င်ဝင်ချင်း အပေါက်ဝမှာတင် ငါးပိသိပ် ငါးချဉ်သိပ်သလို တိုးနေခဲ့ရတာပါ … ။ လူအရမ်းကြပ်တာကြောင့် ပြန်လှည့်ဖို့ စိတ်ကူးမိပါသေးတယ် …. လာပြီးမှ မထူးပါဘူး ရအောင်ဝင်မယ်ဆိုပြီး … ကြက်တောင်ပံခတ်လို…. လက်နှစ်ဘက်နဲ့ … ဘေးကလူတွေကြား တိုးကာ ဝှေ့ ကာ အနံ့ပေါင်းစုံရှူပြီးမှ အတွင်းသို့ ရောက်ပါတယ် … ။ အတွင်းသို့ရောက်တာကလည်း … ရွှေ့လျားလှေခါးမတပ်ထားပဲနဲ့ …ရောက်သွားပုံမျိုးပါပဲ ..။
လူတွေက တိုးကြိတ်ပြီး အထဲဝင်ရဖို့အရေး … အင်တိုက်အားတိုက် လှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတာကြောင့် ကျွန်မက အသင့်အနေထားနဲ့ မတ်တပ်လေး ရပ်ရေယုံ အလိုလိုရွှေ့လျားပြီး ၀င်ပေါက်ထဲရောက်သွားတာပါ … ။ ပြန်တွေးကြည့်လျှင် အတော်ရယ်စရာကောင်းပါတယ် … ကျွန်မရဲ့ ဖြစ်ပုံ တစ်ယောက်ယောက်များမြင်သွားလျှင်ဖြင့် … ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ခံရကိန်းပါ… ။ သူများပစ္စည်းလည်း အချောင်မလိုချင်တတ် ၊ လိုချင်စိတ်မပြင်းပျတတ်တဲ့ ကျွန်မက ကိုယ့်ပစ္စည်းဆိုလည်း … အရမ်းကို ဥစ္စာခြောက်ပါရဲ့ … ။ လူတွေ စုံစိအောင် တိုးယှက်နေတဲ့ အ နေထားမှာ … ကျွန်မရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှူလေးတွေကို ကာကွယ်ပေးရပါတယ်… ။ ဘေးမှာပါတဲ့ ကျွန်မချစ်သူကတော့ …. ခန်းမထဲမ၀င်တော့ပဲ ပြန်ဖို့ တတွတ်တွတ် ပြောနေသော်လည်း.. သူလည်းကျွန်မလိုပဲ … တိုးကြပ်နေတဲ့လူထဲ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ တော်တော်အနေရခက်နေပါရဲ့ … ။ သူပြောသမျှ ကြားတချက် ၊ မကြားတချက်နဲ့ … နဂိုအကျင့်အတိုင်း ကိုယ့်ပိုက်ဆံအိတ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ရပါတယ် … ။
မြင်သာအောင်ပြောပြရလျှင်ဖြင့် … ကျွန်မအခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ အိတ်က အကြီးကြီပါပဲ … အနည်းဆုံး ခရီးနှစ်ရက်ထွက်လောက်တဲ့ပစ္စည်းဆံ့တဲ့ အိတ်ဆိုဒ်မျိုးပါ … ဒီအတိုင်းလွယ်ထားလျှင်တောင် မှ သူများကိုယ်ကို သွားထိုးနေတာ … အခုလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ငါးပိသိပ် ၊ ငါးချဉ်သိပ်ဖြစ်နေချိန်မှာတော့ … ပိုလို့ ဆိုးပါတယ် … ။ ခါးပိုက်နှိုက်လက်သရမ်းမှာလည်း ကြောက်ရလို့ … အိတ်ကိုပိုက်ထားရတာ …တောသာ မြို့တတ်တော့ အိပ်ယာလိတ်ပိုက်ကာ …မအူမလည် ပုံစံလိုပါပဲ … ။ ပွစိပွစိ ကျွန်မချစ်သူကလည်း … ရုပ်ကြီး ရှုံမဲ့လို့ … ပြန်ကြဖို့ပဲ …အကြိမ်တစ်ထောင်လောက်ပြောနေတော့တာပေါ့… ။ သူပြောသမျှ မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဥစ္စာခြောက်နေရတာ ကျွန်မအလုပ်လေ … ။ သူ့ကိုကြည့်တော့… လူကြားထဲလဲ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ထိန်းသိမ်းရကောင်းမှန်းမသိတာကြောင့် … အနားတိုးတိုးကပ်ပြီး …ကျွန်မလုပ်သလို လိုက်လုပ်ခိုင်းတော့တယ် … ။ ဒါတောင် သူက သူများအိတ်လာဖွင့်လျှင် သိပါတယ် ဘာညာ အထွန့်က တက်နေသေးတယ် … ။ လူကြား သူကြားထဲ သေချာ ရှင်းမပြချင်တော့တာကြောင့် … မျက်လုံးကြီးနှစ်လး စကောလောက်ပြူးပြလိုက်တော့မှပဲ … ကျွန်မလုပ်သလို လိုက်လုပ်တော့တာပါ … ။ ဒါက ကျွန်မရဲ့ အသံတိတ်အချက်ပြနည်းမှန်း သူကောင်းကောင်းသိတယ်လေ … ။
သူကတော့ အပူပင် မရှိသလိုပါပဲ….. အေးအေးလူလူနဲ့ … ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသာ ကျွန်မဆန္ဒအရ လက်က ပိုက်ထားတာ … ဖုန်းတော့ ခါးကြားထိုးမပျက်ဘူးလေ … ။ အဲ့ဒါမြင်ရတော့ ဒေါသထွက်စရာပါပဲ … သူကတော့ .. အမှူမဲ့ အမှတ်မဲ့ပဲ နေမှာပါ … အာရုံမကျလို့ မဖြုတ်မိပေမဲ့ …. အလှူပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ် … ကျွန်မက မြင်မိသွားတော့ … ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်ပြီး သိမ်းခိုင်းပါတယ် … ။ သူများ လာဖြုတ်လျှင် သိမှာပေါ့ ဘာညာ ထပ် အထွန်တက်တာနဲ့ .. ဒုတိယ အကြိမ် … ခပ်ပြင်းပြငိး ကြည့်လိုက်ပါတယ် … ဒီတော့မှ … အမြန်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်သိမ်းပါတော့တယ်… သိမ်းသာသိမ်းတယ် .. ပါးစပ်က ပွစိပွစိနဲ့ … တီးတိုးရွတ်လိုက်သေးတယ်… ဒါကို ကျွန်မကလည်း ကြားဖြစ်အောင် ကြားမိပေမဲ့ … မသိချင်ယောင် ဆောင်နေလိုက်ပါတယ် … သူပြောလိုက်တာ ဖုန်းလာလျှင် ဒီလောက်ဆူနေတာ အိတ်ထဲထည့်ထားရင် …ကြားရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ…။ ကျွန်မခေါ်တဲ့ဖုန်းမကြားလျှင်သာ သူ့ကို ကွိုင်ရှာမှာ အခု ကျွန်မလည်း ဒီမှာ အတူရှိနေတာမို့ … ဘယ်ဖုန်းမှ မကိုင်လည်း ပြသနာမရှိတာကြောင့် … သူပြောတာ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ် … ။ ခဏလောက် ဒုက္ခခံပြီး…. ရေချိုးချထားသလို ချွေးတွေ တကိုယ်လုံး ရွှဲတော့မှပဲ … ၀င်ပေါက်က ကျော်ဖြတ်လို့ရပါတော့တယ် … ။ လူတွေ ပြည့်သိပ်နေတာကြောင့် … လွယ်ထားတဲ့ အိတ်လုံး… ခါးပိုက်နှိုက်စာ မိသွားမှာစိုးလို့ … မျက်စိကို သုံးရာ့ခြောက်ဆယ် ဒီဂရီလည်အောင်လည်း ကြည့်ရပါသေးတယ် … ။ လှတပတ ဖိနပ်လေး စီးသွားပါမှ … ဖိနပ်နင်းခံရလို့ … ဖိနပ်ထိပ်ပဲ့သွားပေမဲ့ … စိတ်မတိုပဲ … ရယ်စရာတောင် ကောင်းနေတဲ့အဖြစ်မို့ … ဒီနေရာက …ဘာနဲ့များ စွဲဆောင်နေပါလိမ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြမိပါတယ် … ။
အထဲမှာ ကဏ္ဌတွေခွဲပြီး အစီစဉ်တွေ ကျင်းပတာ လူတွေမှ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပါပဲ .. ။ လေ၀င်လေထွက်သိပ်မရှိပဲ …လူငွေ့တွေနဲ့ .. တကိုယ်လုံး ရေပက်ထားသလိုပဲ … သင်္ကြန် ရေပက်ခံရပြီး ခဏနားတဲ့ အနေထားနဲ့ တူပါတယ် … ။ ငြီးစိစိဖြစ်နေပေမဲ့… MRTV4က ကျင်းပတဲ့အစီစဉ်တိုင်းမှာ လူတွေ ပြည့်လို့ပါပဲ … ။ ကံစမ်းမဲနှိုက်ရတဲ့ အစီစဉ်ထဲ … ကလေးတွေကြား တိုးပြီး … မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေ ဖြေခဲ့ကာ ကံစမ်းမဲ နှိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် … ။ကံကောင်းလွန်းတဲ့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံး ဘောပင်တယောက်တချောင်းရပါတယ် … ဒါတောင် ဗလာပါလျှင်ဖြင့် … ဗလာကျလောက်အောင် ကံကောင်းမဲ့လူတွေပါပဲ … ။ကျွန်မတို့ရှေ့က ကလေးတယောက်က နာရီတလုံးမသွားတာ မြင်လို့ …. ဒီလောက်တောင် လက်ကီးကောင်းတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကံကို … ထောပနာပြုမိပါရဲ့ …
ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လိုက်ကြည့်ရင်း … လူတွေအုံခဲနေတဲ့အစီစဉ်တခုကိုရောက်သွားတော့တယ် … လူတွေ အုံခဲလွန်းလို့ …ဘာမှ မမြင်ရတာနဲ့ … ဟိုတိုးလိုက်ဒီတိုးလိုက်နဲ့ မျက်စိစုံမှိတ်ကာတိုးရင်း … ဆက်တိုးစရာမရှိတော့လို့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့မှ … ရှေ့ဆုံးကိုရောက်နေတော့တယ်… တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့.. ဒီတခါ စုံမှိတ်ပြီး လူတိုးတာ … အသုံးဝင်သားပဲ မှတ်တယ်…ဘေးကြည့်တော့.. ဘယ်သူမှ မရှိပဲ… မိုက်ကိုင်ထားတဲ့ လူနည်းနည်းပဲ တွေ့ရတယ် … ။ အဲ့ဒီထဲက လူတစ်ယောက်က ကျွန်မလက်ထဲ မိုက်လာပေးတော့ ကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ …ယူထားလိုက်သေးတယ်… ပြီးမှ သတိဝင်လာပြီး … ဘာလို့ …ငါ့လက်ထဲလာပေးလဲ ကြည့်တော့… ကျွန်မရောက်နေတာ စင်မြင့်ငယ်လေးအပေါ်မှာမို့ပါ… ။ အပြင်ဆင်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ …ရေးထားတဲ့ စာတန်းလေးကြောင့် ခေါင်း နားပမ်းကြီးသွားရပါတော့တယ် … ။ ရေးထားတာလေးက … စကားနပမ်းတဲ့လေ … ။
တွန်းတိုက်တိုးပြီး … ၀င်လာတာနောက်ဆုံး စင်ပေါ်ရောက်ရတဲ့အဖြစ် မထူးတော့ပြီမို့ … ရေလိုက်ငါးလိုက် တပွဲတလမ်း အကဲစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ … စကားနပမ်းဝင်ပြိုင်ပါရော … ။ ကျွန်မလူကြားထဲ ၀င်တိုးတုန်းက ဒရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့ … ချစ်သူကလည်း အမှတ်မထင် ကျွန်မနဲ့အတူ စင်ပေါ်ရောက်နေလေရဲ့ … ။ လူအများကြီးထဲ ဒီအတိုင်း ပြန်ဆင်းသွားရလျှင် သရုပ်ပျက်တယ်လို့ … တီးတိုးပြောပြီးသူ့ကိုလည်း စင်ပေါ်မှာ ကျမဆွဲထားခဲ့ပါတယ် … တကယ်တော့ …ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း … လူအများကြီးပြူးကြည့်ခံရမှာ မနေတတ်လို့ပါ … ဒါနဲ့ တဘက်က စကားနပမ်းစစ်ထိုးမဲ့ ပြိုင်ဘက်နှစ်ယောက်လည်း တက်လာတော့တယ် … ကျွန်မအတင်းတိုးဝှေ့သွားတဲ့အချိန်က စကားနပမ်း ပြောမဲ့ လူကို စင်ပေါ်အင်ဗိုက်လုပ်တဲ့ အချိန်နဲ့ … တိုးနေတာကြောင့် ပါပဲ … ။ နှစ်ယောက်သား … ရယ်ဖြဲဖြဲနဲ့ … ရှက်ကိုးရှက်ကန်းလုပ်မနေတော့ပဲ ….. ရောက်ရာနေရာမှာ အဆင်ပြေအောင်စကားနပမ်းပြိုင်ခဲ့ကြတယ်… ။ စကားအေးတဲ့သူနဲ့ …စကားနပမ်းဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေမယ် မထင်တာကြောင့်..ကျွန်မကချည်းပဲ ခရားရေလွှတ်ပြောဖို့ … တိုင်ပင်ထားပေမဲ့..တကယ်တမ်း …သူက …ကျွန်မထက်ကိုပိုလို့ ပြောနိုင်ခဲ့တာပါ … ။ အနိုင်အရှုံးမရှိပဲ … သားရေပွဲအဖြစ် အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ် … ။ အမှတ်တရအနေနဲ့… logo ပါ ကီးချိန်းရယ် … မတ်ခွက်တစ်ခွက်ရယ် ရခဲ့တယ် … ။ ချွေးတရွဲရွဲ အဆီပြန်နေတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့…..အစီစဉ်စုံလျှောက်ပတ်ကြည့်ပြီး ခဏမှာတော့ … နာရီက ဆေးခန်းသွားချိန်ရောက်ပြီမို့ …. လာရာလမ်းအတိုင်း တိုးဝှေ့ပြီး ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ် … ။ အသွားရော အပြန်ပါ လူတိုးရတဲ့ပွဲမို့… အရမ်းပဲ စည်ကားခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုပါပဲ … ။ သူများနိုင်ငံမှာလိုချွေးထုတ်ခန်းသွားစရာမလိုပဲ ချွေးထွက်ရတဲ့နေပါပဲ…… ။ ပြန်လာတဲ့လမ်းရောက်မှ … စဉ်စားမိတာက …. ဒီလောက်လူများတာ ဘာညာကွိကွမဖြစ်လို့ တော်သေးတယ်လို့ …. မစဉ်းစားပဲသွားပြီးမှ … ပြန်တွေးရင်း ….လန့်လာတာမို့ … နောက်ဆိုလျှင် သတိနဲ့ယှဉ်ပြီး သွားလာတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ် ။
ရလာတဲ့ မတ်ခွက်ကို ကြွားတာပေါ့။ ဒီမှာ ပြပွဲတခုကို သွားတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ကိုယ့်ရှေ့ကလူတွေ ယူတာတွေကို အနောက်ကနေ လိုက်လုပ်တာ ဂဏန်းပေါင်းစက် လှလှလေးတခုရလာတယ်။ ပစ္စည်းပါမှန်း မသိပဲ ရမ်းသမ်းယူလာတာ။ ပါမှန်းသိရင် ၃၊၄ အိတ်လောက် ယူလာပါတယ်။
အာ……..မမှီ ဒီပြန်ရောက်နေတာလား ။
live ပြတာပဲ..တော်တော်အပင်ပန်းခံတာပဲ..etone ၇ယ်…ဖိနပ်ပြန်ပါလာတာတော်သေးတာပေါ။
eitone လေး ရန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ လိမ်မာနေပါလား?
မလန်းပဲ အတော်လေး ဂွမ်းသွားတယ် လေးပေါက်ရေ … စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ … ဒါပေမဲ့ … ပျော်စရာကောင်းတယ် … ။
ဟုတ်ပါ့ etone လည်း အားကျမခံ ချွေးထုတ်ခန်းသွားပြီး ပိုစ့်တင်တာလို့ အောက်မေ့သွားတာ။
ချွေးတစိုစိုနဲ့ လှောင်ပိတ်ပိတ် လူအုပ်ကြီးထဲ ကိုယ်တိုင်ရောက်သလိုပဲ
ပိုစ့်နာမည်ဖတ်ပြီး မအီးတုံးတစ်ယောက် ချွေးထုတ်ခန်းမှာ သွားလန်းနေပြီမှတ်တာ
နွယ်ပင်လဲ MRTV4ရဲ့ … 7နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းနားကို သွားမလိုပဲ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အရင်ဦးအောင်သွားခဲ့ပြီး နင်တော့ မသွားလေနဲ့ အရိုးတွေကျိုးကုန်မယ်ဆိုတာနဲ့ မသွားဖြစ်ခဲ့ရဘူး အခု etone ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးမှပဲ မသွားဖြစ်ခဲ့တာ မှန်သွားတယ်
ဟုတ်တယ် နွယ်ပင်ရေ … မသွားတာမှကောင်းသေးတယ် … ။ ကိုယ်တွေလည်း အစီစဉ်မရှိဘူး … ရုပ်ရှင်ရုံ ကြိုတင်လက်မှတ်မ၀ယ်ထားမိပဲ ပွဲစဉ်ချိန်ထက် တနာရီစောသွားဝယ်တာ လက်မှတ်ကုန်သွားလို့လေ … ။ အဲ့ဒါနဲ့ … ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်ပဲ …. ဘယ်သွားလျှင်ကောင်းမလဲတွေးပြီး … MRTV4ပွဲရှိတာပဲဆိုပြီး သွားဖြစ်တာ … ။
သူများတွေပြောတာပဲ live ပြတယ်တဲ့လေ …အဲ့ဒီမှာကတည်းက ကြပ်ညပ်နေတာပဲတဲ့…
ညဘက် အိမ်ပြန်ချိန် အမြဲနောက်ကျတော့ … TV က ပြမပြ မသိပဲ သွားမိတာ … ။
ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းရိုက်လို့မရဘူး …တွန်းလိုက်တိုက်လိုက်နဲ့ … ။
(မေ့ကျန်တဲ့) တစ်ပုံကလွဲလို့ …ကျန်တဲ့ပုံတွေ နည်းနည်း ၀ါးအောင် တင်ထားပေးတာ … ပြည်သူတွေရဲ့ ရုပ်တွေပါလို့ … ရန်လာတွေ့ခံရမှာ စိုးလို့ … ။
ပုံတွေဝါးနေပေမဲ့ ဘီဖိုးနဲ့အာဖတာ ပြခန်းက အဝါရောင်ဝတ်စုံနဲ့ ကောင်မလေးတွေပုံကြောင့် ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်။ မီနီစကပ်နဲ့လက်ပြတ်နဲ့ဆို ကုမ္မဏီလည်း ဝန်ထမ်းယူနီဖောင်း စရိတ်သက်သာ၊ ပရိတ်သတ်လည်း မျက်စိအေး၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပိုအဆင်ပြေသွားမဲ့ဟာကို… အခုတော့
ကြောင်ကြီး ကြောင်ကြီး ကြည့်တတ်တယ်။ မြင်တတ်တယ်နော်။
ကျုပ်ကလည်း အဲ့ဒီပုံ ၀ါးတားတားလုပ်ဖို့ မေ့ပြီး တင်လိုက်မိတာ မှားလေခြင်း
တီဗွီမှာ လူတွေ တန်းစီနေတာ မြင်တာနဲ့ သွားချင်စိတ်မရှိတော့ဘဲ မသွားဘဲ နေလိုက်တာ.. စကားနဘန်း ပြောခဲ့တော့ ရုပ်သံမှာ လာမှာလား ဘာပြောလဲဟင်။